TidyMarketer: Niile Na-Na-Na-Na Onezụ Azụmaahịa SaaS maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Martech Zone
Mgbasa mgbasa ozi ụwa na-abawanye na ọnụego 5.1%, na-atụ anya iru Njeri puku 2.1 na 2019, dị ka McKinsey si kwuo. Dijitalụ mgbasa ozi etinyegoro weghaara TV mmefu na 2018. TidyMarketer amalitela usoro mgbasa ozi ahịa na onye na-ewu atụmatụ mgbasa ozi, kalenda mkpọsa, akụkọ na-akpaghị aka na ọtụtụ ndị ọzọ, maka ịmekọrịta ndị ahịa na ụlọ ọrụ.
Ikwe SaaS na-enye ndị ahịa ohere ịhazi, ịhazi, imekọ ihe ọnụ, na ịhazi njikwa mgbasa ozi niile site na otu ikpo okwu. Ezubere ya iji nyere ndị ahịa aka ịgba ọsọ nke ọma site na ịre ahịa email na mgbasa ozi mmekọrịta, igosipụta mgbasa ozi, PR, ihe omume na ọtụtụ ndị ọzọ.
TidyMarketer si akpaka Media Plan Builder, nke jupụtara na benchmark na usoro KPI, na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ma gbanwee usoro mgbasa ozi, na-eji oke mmefu ego na arụmọrụ mkpọsa ama ama iji kọwaa nsonaazụ mgbasa ozi. Nke a nwere ike ịbụ ahịa ịntanetị, ngwa ngwa mkpanaka, na-eduga ma ọ bụ karịa.
TidyMarketer atụmatụ gụnyere
Atụmatụ ahia - na - enye ndi otu ohere ka ha wuo ahia ahia zuru oke, juputara na ihe ngosi doro anya, tinyere ihe atumatu na ntinye ego nke mgbasa ozi, di njikere isoro ndi otu ndi ozo ma obu ndi ahia. Ngwaọrụ akpaghị aka na-ewepụ mkpa maka akụkọ ntuziaka, nke a na-enyere ụlọ ọrụ aka ịhazi ọrụ ha, belata ihe ize ndụ nke njehie mmadụ na n'ikpeazụ rụọ ọrụ.
Kalinda mkpọsa - Dọrọ na dobe atụmatụ na ọkwa ozugbo, pụtara ìgwè nwere ike ịhazi ọtụtụ mkpọsa n'otu ebe.
Task Manager - na - enyere ndị ọrụ aka ekenye ndị otu ọrụ ọrụ ma jikwaa ndị ọrụ ngo na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Maka $ 25 / ọnwa, teknụzụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-eme ka ndị ahịa nwee atụmatụ, ịhazi na jikwaa mkpọsa, site na ntanetị, mfe iji. Ezubere ya iji nyere ndị ahịa aka ịgba ọsọ nke ọma site na ịre ahịa email na mgbasa ozi mmekọrịta, igosipụta mgbasa ozi, PR, ihe omume na ọtụtụ ndị ọzọ. TidyMarketer na-enyekwa ihe ngwọta ụlọ ọrụ.
Banye maka TidyMarketer
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọta maka TidyMarketer n’isiokwu a
Tags: kalenda mkpọsaatụmatụ mkpọsanjikwa ọrụ mkpọsadijitalụ ad na-emefungosipụta mgbasa oziemail Marketingiheahia ahiaprelekọta mmadụ mediaonyeisiokwu